Fampandrosoana vaovao ho an'ny watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5 | Avy amin'ny mac aho
Fampiasana vaovao ho an'ny watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5
Nandritra ny tolakandron'ny omaly dia namoaka ny kinova beta an'ny watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5 ho an'ny mpamorona. Ao amin'ireto kinova beta vaovao ireto dia ampiana ny fanamboarana bibikely mahazatra sy ny vahaolana amin'ireo olana voamarika tamin'ny endrika taloha ho an'ny mpamorona.
Amin'ity tranga ity, ny kinova farany an'ny iOS 11.2.1 dia navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra ary miaraka aminy ny vahaolana amin'ny olana misy eo amin'ny fiarovana Homekit. Etsy ankilany, ny mpampiasa nys betas dia ao amin'ny kinova 11.2.5 isa izay tsy mifanaraka amin'ny ambiny ary lasa fandefasana hafahafa io. Ary ny faharefoana dia hita tao amin'ity kinova ity ny rafitra miasa izay nisy fiantraikany mivantana tamin'ireo mpampiasa manana fitaovana marani-tsaina ary miaraka amin'ity kinova vaovao ity dia voavaha ny tsy fahombiazana.
Apple dia mbola manohy mampiditra kinova beta ho an'ny mpamorona ary manohy ny fanamboarana bibikely hita, nefa tato ho ato dia tsy maintsy lazaina fa ireo kinova ireo dia mitondra olana ara-piarovana bebe kokoa noho ny mahazatra ary noho izany dia zava-dehibe ny fiheveran'ny Apple izay avoakany amin'ny fomba ofisialy, izany hoe manana ny fahatsapana izahay fa nalefa tsy nisy fanaraha-maso loatra avy amin'ny orinasa.
Ary ny kinova beta ho an'ny iOS dia mijanona ao amin'ny 11.2.5, 11.2.1 ho an'ireo mpampiasa tsy manana beta ary ho an'ny watchOS dia mahatratra 4.2.2 sy tvOS 11.2.5 isika. Amin'izao fotoana izao ao amin'ny macOS ny Beta misy dia High Sierra 10.13.3 ho an'ny mpamorona, ary noho izany hatramin'ny herinandro ambony dia tsy misy kinova vaovao antenaina ho tonga, na eny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Fampiasana vaovao ho an'ny watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5